Inkcazo-Uhambo lweHlabathi lwe-FME iBarcelona -Geofumadas
Inkcazo-Uhambo lweHlabathi lwe-FME iBarcelona
Sisandula ukuya kwi-FME World Tour 2019, ekhokelwa nguCon Terra. Esi siganeko sasiqhutywe kwiindawo ezintathu eSpain (iBilbao, Barcelona kunye neMadrid), yabonisa intuthuko eyenziwa yi-FME software, isihloko sayo esisiseko Umdlalo woTshintsho kunye neFME.
Ngolu khenketho, abameli beCon Terra kunye ne-FME, babonise indlela ukukhula kwabo okusekwe ngayo kwiimfuno kunye nezicelo zabasebenzisi kwimveliso nganye, enje nge-FME Desktop, i-FME Server, kunye neFME Cloud. Ukongeza, amaziko karhulumente nawabucala abonisiwe abonisa amabali abo empumelelo, begcina ubudlelwane kunye neCon-Terra kunye nokusetyenziswa rhoqo kwe-FME.
Iseshoni yaqala ngomdlalo ukuphula i-ice kunye nabafundi, usebenzisa ifoni yeselula, uchungechunge lwemibuzo enxulumene nabaguquleli be-FME baphenduliwe, kwaye iibhaso zanikezelwa abo baphendule ngokuchanekileyo nangokukhawuleza. Emva koko, ukubonakaliswa kokuhlaziywa kweso sikhombisi kuqalile.
Senze esi siganeko eBilbao, eBracel kwaye ngoku siya eMadrid, siye sahlaziywa ngenani labantu abaye bathatha inxaxheba kulo mcimbi, kuba ngokuqhelekileyo abo bafika ngabasebenzisi abathanda ukufunda ngeendaba eziza kuzisa i-FME nendlela yokuyisebenzisa zakho iiprojekthi Sivuyiswa kakhulu ngokumkela kwethu. " ULaura Giuffrida - kunye ne-terra GmbH
Kubonakala kunengqondo ukuba isofthiwe engenza iinkqubo ezinciphisa umthwalo wezixhobo ezininzi eziqukethe isicelo se-GIS, asikabikwayo - ikakhulukazi eMzantsi Melika - apho inani labasebenzisi lingabikho nil, xa kuthelekiswa namazwe amaninzi eYurophu naseNyakatho Melika (eMerika okanye eCanada). I-FME Desktop Software, iyaziwa ngokuba ne-interface elula kunye nezixhobo ezibonelela ngamava amaninzi omsebenzisi.
Ukunika umbono uyemka, siqale esithi exhasa neenkqubo iintlobo ezininzi yeefomati data evela kwemilo (.shp), CAD (.dxf, .dwg), neefomathi ezingezo-lwendawo ezifana iinkcukacha, okanye data ngumzekelo 3D njengeBIM. Ngoko ke, yintoni eyenza i-FME, inokuhlambulula zonke iintlobo zeephutha okanye iimeko apho ukungena kwi-GIS kunokudala iingxaki ezinzima. Omnye weyona mizekelo ezicacileyo - yaye siyazi ukuba imbono abaninzi baye batyhubela this- SIG iimpazamo ithopholoji, FME ecoca zonke iziphoso enjalo angene kubo ArcGIS okanye enye GIS, i-PC akuthethi folokohlo kunye izaziso.
Ukongezelela ekucoceni, i-FME ingatshintsha uhlobo lweedatha, kunye nezo zinto ziqulethwe kwifayile nganye-rename, engeza, ususe iimpawu, amasimu. Oku ngasentla kunokwenzeka, kunye nokusetyenziswa kweenguqu ze-450, ezenzelwe nganye imfuno ethile, enokuthelekiswa nabanye abasebenzisi ngeHub Hub., Izinto ezintsha ezifana neepakethi kunye neeprojekthi zaxoxwa ngazo.
Imiboniso igxininise ukongezwa kwezinto eziphathekayo kunye nezixhobo zokusebenza, umzekelo, abaguquleli abachaphazelekayo ngokucwangcisa i-raster bongezwa kwesoftware, njengale: RasterObjectDetector, RasterObjectDetectorTrainer, kunye ne-NaturalLanguageProcessor, kunye nabaguquli abatsha bajolise ekufundeni koMatshini.
Inzuzo ye-FME kukuba isekela ukungena kunye nokulawulwa kweentlobo ezininzi zeenkcukacha, kwaye oku unokusombulula zonke iimeko ezinxulumene nazo. ULaura Giuffrida - kunye ne-terra GmbH
Kuba abasebenzisi zangoku kunye owayesakuba FME uwabize ekhuselekileyo ukuba i-software ukuba ihlanganiswe umsebenzi decompression, ke, kule version entsha ungongeza iinkcukacha abe nenkqubo uya kufunda, ngaphandle kuqala utsala ukuba i desktop, into eluncedo kakhulu, ngenxa yokuba ingengabo bonke ukwamkela izicelo kunye software noovimba, bona bubonakala okonga ixesha ekwenzeni imisebenzi.
I-FME ayikho itekisi yokubonwa kwedatha, isofthiwe esesemva kwesigqeba se-GIS okanye ezinye iisistimu, amandla ayo asebenza ekusebenziseni, ukucoca idatha ngokusebenzisa ukuguqula. Ekugqibeleni, emva kokwenza okufunekayo, uyayibhala kwakhona kwifomethi oyifunayo. ULaura Giuffrida - kunye ne-terra GmbH
Uninzi lwabahlali kwiimeko ezihambelana ne-FME, ngaba abo banexesha lokusebenzisa isofthiwe ye-FME njengentloko yeeprojekthi zabo (iinkampani okanye oorhulumente), zombini nakwilizwe. Kulo nyaka, uncedo luye lwaba luncinane, kubonakala ukuba kwakukho abantu egumbini abangazange basebenzise isicelo kwaye beza bayazi izibonelelo zayo, kunye ne-Con Terra kunye ne-FME.
Ukubamba abahlali, baqala ukubonisa zonke izibuyekezo zezixhobo zabo kunye nokubandakanywa kwezinto ezintsha. Kuqaliswe ngombonakalo, kunokwenzeka ukuba utshintshe kwimimoya emnyama, enye yeemfuno ezenziwe ngabasebenzisi, kunye nokuphucula kwinqaku, imibala ngokweedatha, iifestile ezinokulungiswa ukuba zihambelane nomsebenzisi.
Kananjalo wathetha iifomati kongezwa DICOM (imifanekiso oomatshini ukuba emzimbeni womntu), TopoJSON (ngobuhlobo topological), WCs, utsalo kunye nokufunda izixhobo GPS (Garmin ipoi), ukufikelela kwi API Socrata kunye izihlanganisi ezintsha eziyinxalenye Hub FME, njengoko AzureBlobStorageConnector, S3Connector okanye CityworksConnector.
I-FME ifunda kwaye ibhala iifayile ze-ESRI i3s
Ngokufanayo, siye isongeza olunye usebenziso ezinxulumene Raster izifundo Multitemporal apho imifanekiso zibekwe -arrastrándolas eneenkcukacha evela imvelaphi nokuba inkqubo ezisebenza scan ebonisa utshintsho, odala oopopayi iphele yonke imifanekiso ekhethiweyo. Enye update yimpumelelo kakhulu ohlobene Utshintsho -ngaphambili UpdateDetector-, esetyenziselwa ukuchonga utshintsho phakathi kolunye uqoqo lweenkcukacha kunye nolunye, ngoku kuya kunokwenzeka ukucacisa ukunyamezela kwedatha. Ukongezelela, amathuba okudala iimpawu ezingagqibekanga yongezwa ukuze umsebenzisi, ofuna iguquguquli ezininzi, akadingeki ukuba enze yonke inkqubo ukususela ekuqaleni, ukubeka iiparamitha ngethuba ngalinye.
Uphuhliso abazange ezinxulumene kuphela Desktop FME, kodwa ezinye izinto ezifana Umncedisi FME, apho iimpawu ezinjalo wongezelela: log kubudlelwane ulawulo lweprojekthi nocococ, transfer Iiprojekthi Umncedisi FME kwi FME Hub, oqhube imithetho yokukhusela iphasiwedi kunye nokukhethwa koqwalaselo lomsebenzisi.
Ukongeza, bathetha malunga nokuphucula enye zixhobo okulindelekileyo, EsriReprojector, leyo ngaphambili kufuneka umsebenzisi ukuba ilayisenisi ESRI-ArcGIS ngoku lo hlaziyo awusebenzisi ArcObjects okanye ufuna ngaphezulu kwe mvume FME.
Ukuba sithetha ngamabali aphumelelayo, kukho amaqela amaninzi ahlanganisana ukubonisa iingenelo zokusetyenziswa kwe-FME, ngeeprojekthi ezifana Ukupapashwa kunye nokusasazwa kwePopographic Cartographic yeSixeko saseBarcelona ye-Institut kaMasipala we-Informàtica Ajuntament de Barcelona, ​​i-Nexus Geographics yayikho ikwabonisa indlela abazisebenzisa ngayo iinkonzo zokukhuphela ezinamandla kunye nokuzenzekelayo kolawulo lwe-metadata kwi-IDE kusetyenziswa i-FME Server .
Siyaqiniseka ukuba bayabuza, ukuba i-FME idinga ukuthengwa kwelayisenisi, kunjalo, nangona kunjalo, abanye abahlalutyi nabasebenzisi baye bagxininisa ukuba ukuzuza akubonakali iindleko ezinkulu, kodwa utyalo-mali olude olude, kuzo zonke iindleko ezimele ukuveliswa kweeprojekthi zeentlobo zonke kunye nazo zonke iintlobo zeendawo. Ukufumana ulwazi oluthe xaxa malunga neemveliso ze-Safe Software, abaphuculisi be-FME, kufuneka uhambe kwiwebhusayithi yabo, okanye blog apho uluntu luchaza iinkxalabo zalo, liphendula indlela iinkqubo ezenziwa ngayo, kunye nenkcazo yabo bonke abaguquli kunye nezixhobo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iindaba zeGeo-engineering -I-AutoDesk, iBentley kunye ne-Esri
Post Next I-Kanbanflow-sisicelo esihle sokulawula imisebenzi esalindelweOkulandelayo »